Fadlan ha wicin iskuulka ilmahaaga inta lagu jiro xaaladda deg dega ah. Khadku wuxuu u furan yahay xaalada degdea ah keliya. Haddaad caawimo rabto, wac lambarka degmada: 763.391.7000
U DIYAARSANAANTA XAALAD DEGDEGA
Iskuulada Nawaaxiga Osseo waxay leeyihiin qorshe gurmad degdega oo dhamaystiran ayna la diyaariyeen hay’ado amaan, maamul Gurmad, iyo masuuliyiin caafimaadka dadweynaha ka socda. Tababaro ayaa lagu qabtaa joogto ah dhammaan dhismayaasha si loogu diyaariyo ardayda iyo shaqaalahaba xaalad degdeg ah.
Qorshaha degdega ahi wuxuu ku salaysan yahay afarta talaabooyin ee lagaga hortago dhammaan halisaha caalamiga ah si degdeg ahna loo fulin karo; Haddiiba ay dhacdo, maamulaha iskuulka ama kormeeraha iskuulada degmada ayaa fulin doona mid ka mida ficilada soo socda sidii loogu baahdo.
Daadgurayn: Dhammaan ardayda iyo shaqaaluhuba dhismaha way ka baxayaan. Haddii dhulka iskuulku aanu amaan ahayn, ardayda waxaa la geynayaa goob kale.
Hoy la hayo*: Dhammaan ardayda iyo shaqaalaha waxaa loo kaxaynayaa dhismaha. Albaabada iyo daaqadaha banaanka waa la qufulayaa. Imaashaha dadweynahana waa la hakinayaa. Haddii walax halis ah lagu sii daayo deegaanka banaanka, meelaha hawada ka soo gasho waa la xirayaa si ku meel gaara si aan wasakhdu u soo gelin.
XIRID*: dhammaan ardayda iyo shaqaaluhuba waxay xiran doonaan albaabada iyo daaqadaha si amaana.Imaanshaha daweynahana waa la hakin si ku meel gaara.
Hoy Cimilada Daran: Dhammaan ardayda iyo shaqaalahaba waxaa loo kaxayn doonaa aag/hoy loo qorsheeyey oo dhismahaa dhexdiisa ah. Haddii cimilada darani dhacdo marka la baxayo, basasku inay daahaan baa dhici karta.
* Inta lagu jiro xayiraada xiritaanka dhismaha dadweynaha looma ogola inay soo galaan oo ay ku jiraan waalidku. Markii la qaado xayiraada, waa laguu ogolaanayaa inaad soo gasho dhismaha